Apple Music pane iOS 10: saka ndinovimba (uye ndinoshuvira) kuti ive | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | iOS 10, Apple zvigadzirwa
Nezuro chete, Bloomberg ndiye akabatidza fuse nekuzivisa nyika kuti Apple yaizoita shanduko Apple Music kuti vaizopa kumusangano weWorldwide Developer Conference wa2016 uchaitika kubva munaJune 13 kusvika 17. Rudzi urwu rwenhau runowanzo kupihwa naMark Gurman, asi ivo vaive kumberi kwake, kwete nemamwe mashoko ekutanga kuti mupepeti wechidiki we9to5mac aive nebasa rekuburitsa pachena. Isu tatoziva kuti Apple Music ichavandudza, isu tinoziva zvimwe uye zvino yave nguva yedu kuburitsa shanduko tinoda kuti iwe ubatanidze iyo nyowani vhezheni kubva kuApple Music application.
1 Apple Music + Rwiyo Rwiyo
2 Kuvandudzwa kwemukati
3 Vandudza chikamu che "For you"
4 Nyowani yekuburitsa yambiro
5 Kubatana kunofanirwa kuchinja kana kutsakatika
6 Yakakwira odhiyo mhando
7 Tsika zvinyorwa
8 Ruramisa iwo madiki madiki
Apple Music + Rwiyo Rwiyo
Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakaratidzwa naGurman uye izvo zvandinotarisira kuzhinji. Parizvino, kuitira verenga mazwi acho yenziyo muMusic application yeIOS kana iTunes ndine zvingasarudzwa zviviri: wedzera mazwi acho manzwi (kana kushandisa Get Lyrical) kana kushandisa Musixmatch, chishandiso chisingawanikwe OS X. Kana ndangopinza manyorerwo mumetadata. yeTunes, ndinofanira kushandisa widget yenzvimbo yekuzivisa. Iyo widget Ndakaitenga kare kare uye handinyunyuti (zvakawanda), asi iri «kubatanidza» iyo isina kumbopedza kundigutsa uye inondimanikidza kutarisa kurudyi rwechidzitiro kuti ndiverenge mavara, kana zvandaida kuda kuva navo pamberi pangu.
Dambudziko neiri pamusoro system nderekuti iyo widget Ini ndinoshandisa ndinogona chete kuratidza rwiyo rwandakachengeta munharaunda (mune metadata). Kana ndikateerera nziyo mukutenderera uye ndichida kuverenga mazwi acho, ndinofanira kuzvitsvaga paInternet. Chido changu pano chiri "nyore": kuti kuvepo bhatani rinoonekwa zvakanaka kundiratidza mazwi echinhu chiri kuridzwa nekungobaya chete kana kudzvanya pazviri. Uye, zvakanyanya kukosha, haufanire kuwedzera mazwi acho pamurume.
Iyo inowirirana yeMusic application hakusi kuti ini handifarire zvakanyanya, asi inogona kugara ichivandudzwa. Semuenzaniso, chii chakaitika kusarudzo ku ona zvese zviri mumamiriro ezvinhu? Zvinoita kunge zvisina musoro, asi pane 5.5-inch iPhone iyo yatiri kubhurawuza neSafari, zvingave zvakanaka kugona kuchinjisa mashandisirwo uye haufanirwe kuisa iyo iPhone yakatwasuka. Iniwo ndakafarira ma discs angu ese aitaridzika kana ndikaisa iyo iPhone mune landscape mune dzakapfuura shanduro.
El mini-mutambi iwe unofanirwa kufunga zvakare. Chii chiri kushandiswa kwemini-kutamba kana kuti nemaoko kufambisa rwiyo ndinofanira kurikurisa? Kana ndichifanira kuva akatendeseka, handigone kufungidzira kuti ndingaite sei kuti ndivandudze (kwete basa rangu), asi ndinoda kuve neakawanda masimba anowanikwa panguva imwe chete kuti ndikwanise kuenderera mberi ndichitsvaga zvikamu zvakaita se "Zvewe".
Vandudza chikamu che "For you"
Apple Music chikamu chako
Sezvandambotaura kare, harisi basa rangu kufunga nezvekuvandudza zvinhu asi, kubvira zhizha rapfuura, iyo chikamu «For you» Izvo hazvina kundipa zvachose. Ndakawana mapoka mazhinji nekutenda (kuwanda kwekutenda) kuApple Music, asi zvaisave nekuda kwezano rebasa, asi nekuti ndakavawana nekuti vaitambidzwa panhepfenyuro yeredhiyo yandakagadzira kubva kumunyori kana rwiyo.
Chimwe chinhu chinofanirwa kugadziriswa muchikamu chino inyaya ye "Unoziva here ...?". Ngatione: kana ndine mimhanzi yangu yese muICloud library, unondibvunza sei kana ndichiziva MetallicA? Kwandiri? Ehe hongu, ini ndinovaziva, uye pamwe zvirinani kupfuura vako nyanzvi. Kana ndine mimhanzi yake muraibhurari yangu, usazviwedzera kwandiri sekukurudzira, wedzera rimwe boka randinoda.
Uye sezvo isu tiri pano, kana iwo wega musambo wemimhanzi wandakagadzirisa senge inofarira ndeyeMatombo nedombo, ndeapi mapoka akaita saCafé Quijano ari kuita ipapo? (ichokwadi). Sekuseka iko kwakanaka, asi isu tiri kutaura nezve yakakomba sevhisi.
Nyowani yekuburitsa yambiro
Kusvikira nguva pfupi yadarika, kuti ndizive nezve izvo zvitsva zvinoburitswa zveboka kana muimbi, ini ndaitevera maakaundi avo paTwitter. Dambudziko nderekuti mamwe emapoka andinoda zvakanyanya haasi kana kusagadzirisa yavo Twitter account, saka nguva nenguva ndaifanirwa kutsvaga iyo Internet (Wikipedia inowanzove saiti yakanaka) chinzvimbo che discographies emapoka aya . Ini ndangobva kuita account ku Muspy uye inoshanda mushe mushe, asi haina Apple ine iTunes uye a yambiro sarudzo? Hongu, iTunes ine yambiro, asi ini ndichakamirira kuti izivise nezve kuburitswa kwazvino Amon Amarth kana Beyond The Black album.
Kubatana kunofanirwa kuchinja kana kutsakatika
Apple Music Batanidza chikamu muIOS 9
Pavakapa batanidza Ndakafunga, "Vachaita kuti zvishande here?" Ini ndinofanira kureurura kuti ini ndaitarisira kuti maartist aizoenda kune iyi nyowani sarudzo, asi mwedzi gumi mushure mekutanga kwayo chiitiko chacho chidiki. Iyo poindi ndeyekuti mapoka uye maartist anoshandisa Facebook kana Twitter kutumira chero kufamba, pikicha kana vhidhiyo. Apple's Connect ndeye kuyedza "kudzoreredza vhiri" uye ini handisi kubheja pariri.
Kana ivo vakatadza kukwezva kutariswa kwevanyori, iyo tabo inongori isina basa. Zvirinani kuishandisa kuwedzera chero imwe sarudzo. Ehezve, hazvisi pachena kwandiri kuti ivo vanofanirwa kubvisa Kubatanidza mugore rayo rekutanga rehupenyu.
Yakakwira odhiyo mhando
Chimwe chezvikonzero icho vanopa ruzha vanopa Apple kuti ibvise 3.5mm headphone chiteshi ndechekuti ichakwanisa kunatsiridza mhando yeruzha. Iyo mimhanzi yekushambadzira sevhisi iyo inopa yakanyanya mhando mhando ndeye TidalAsi runyerekupe rune izvo kuti Apple inogona kubata, kana kuipfuura, munguva pfupi iri kutevera. Hakusi kuti ruzha rweApple Music rwakaipa, asi zvinoratidza kuti rwakamanikidzwa uye kuti runogona kuvandudzwa.
Kune rimwe divi, sezvo ndiri kutaura nezwi, ivo vanofanirwawo kugadzirisa chimwe chinhu chandisingazive kana zvikaitika kune vamwe vashandisi uye mune zvimwe zvinoshandiswa, asi zvangu Apple TV hairidze Apple Music mimhanzi ine yunifomu vhoriyamu. Kana ichinzwa sekunge inokwira kumusoro, painoratidzika kunge iri pasi ... saka hapana mudiwa wemimhanzi anofarira mimhanzi.
Chinhu chandinodawo ndechekuti iwe undipe zvinyorwa zvetsika. Chikamu che "For you" chine zvinyorwa zvakawanda zvandingangoda (hazviwanzo kuita), asi iwo mazita akagadzirirwa vateereri vanofarira mimhanzi yakafanana neyangu. Chingave chakanakira ndechekuti ivo vagadzire sisitimu inoongorora zvandinofarira uye zvinyorwa zvangu kuti gare gare ndigadzire zvinyorwa, semuenzaniso, izvo zvandichangobva kuwedzera uye ndiri kuteerera zvimwe. Kana muvhiki ndanyatsoteerera zvakanyanya kumapoka mashanu, unogona kugadzira runyorwa nenziyo dzakanakisisa makumi maviri dzemapoka mashanu (handisi kureva makumi maviri eboka rimwe nerimwe, kana asiri makumi maviri zvachose).
Ruramisa iwo madiki madiki
Diki diki kuverenga zvakare. Ini handikwanise kutsungirira kuona marekodhi akakosha kwandiri ane cover izvo hazvisi izvo zvazvinofanira kuita. Kana, chii chakanyanya, pane nziyo dzisiri idzo dzinofanirwa kuenda kurekodhi futi. Semuyenzaniso, rwiyo "Mbudzi Mvura" kubva kuGuns N 'Roses album Shandisa Yako Illusion Ini, mune yangu iri kubva kukonzati, kana imwe yenziyo dzandinofarira zvakanyanya kubva kuAmaranthe, "Afterlife" inoisa pane acoustic. Zvinhu izvi zvinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza sezvazvinogona.
Zvisinei. Hezvino izvo zvandinogona kufunga nezve ivo vanogona kunatsiridza. Chii chaungade kuti chionekwe nezve Apple Music muIOS 10?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Apple Music pane iOS 10: saka ndinovimba (uye ndinoshuva) kuti ive
Chinhu chakakosha ndechekuziva kuburitswa kutsva kwevanyori vandinotevera, uye kuratidza nziyo kubva 2010 nenjodzi
Mylo anobva kuUruguay akadaro
Nekukwanisa kuzviratidza, ndakagutsikana. Munyika yangu haisati yavapo.
Pindura Mylo kubva kuUruguay
Chikamu chako chinoshanda chaizvo kwandiri. Anokurudzira akasiyana masitayera andakamupfimba. Unogona kuvandudza asi hachisi chinhu chaunokanganisa.
Ini ndaizovandudza kutsvaga kwenziyo nemumwe munyori, izvo nhasi x nhasi zvinoita kunge zvisingaite kwandiri. Iwe unoisa rendez vouz jean michel jarre uye hazvishande. Zvinoshamisa.
Blacklists: Ini handidi kunzwa zvakati nezvakati.
Pindura kuna sanfe
Zvimwe ... Kana ini ndikabaya pane zvandinoda zvechimbo saka ndingaone kupi iwo mafaro?
Maitiro aunoronga ako maartist, maalbum uye nziyo zvakashata kwandiri. Zvakare, chokwadi chekuve nemoyo hachina basa kwandiri: unofarira mimhanzi yese yaunowedzera. Uye kurodha pasi nziyo dzako ibasa rinonetesa iwe raunogona kuponesa zviri nyore neyakakodzera-gadziriso.
Kwazisa shamwari, ndapota ndinoda kuziva kuti ndingaone sei mazwi enziyo dzangu andakawedzera manyorerwo kwenguva refu, kwete chete mazwi, pamwe neruzivo rwevanyori uye nedzimwe data, ndisati ndavangoona nekungobata sikirini. , Ini ndinowedzera Ruzhinji rwenziyo dzangu rwakawedzerwa kumatunes angu kubudikidza nemaCD angu, zvinoitika kuti mushure mekuedza kose nenguva yandinopa kune zvese izvi, zero, uye ndinoziva kuti data randinoisa ndichiripo, asi hazviratidzike pane yangu iphone, Ndatenda pamberi pako nerubatsiro rwako rukuru, kwaziso .. !!